ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ လျော်ကြေးလား စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
Encarni Arcoya | 26/07/2021 20:28 | အဆင့်မြှင့်တင် 26/07/2021 20:34 | အလုပ်
အလုပ်တစ်ခုရှိခြင်းကသင့်အားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလုပ်မထုတ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်အကြောင်းပြချက်ရှိရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်တိုတောင်းသောကာလ၌သင်သည်အလုပ်မှအလုပ်လက်မဲ့သို့သွားနိုင်သည်။ ထိုကိန်းဂဏန်းများအနက်မှတစ်ခုမှာဓမ္မဓိobjective္ဌာန်ကျကျထုတ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထုတ်ပယ်ကဘာလဲ? ဖြစ်ပျက်ရန်အဘယ်အကြောင်းရင်းများကိုပေးထားနိုင်သနည်း မင်းဘယ်လိုလျော်ကြေးပေးရမလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်ရှင်မှဤတစ်ဖက်သတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းအမျိုးအစားအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောပါမည်။
အလုပ်သမားများညွန်ကြားချက်အပိုဒ် ၅၂ တွင်ဖော်ပြထားသည် ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရေး, ထို့ကြောင့်သူသည်ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ပါကအလုပ်သမားအားအလုပ်ရှင်မှအလုပ်ထုတ်ပစ်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း။ နှင့်တစ်ဖက်သတ်, ထို, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်, အလုပ်သမားမရှိဘဲ, ထိုအချိန်ကငြင်းဆန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်လျော်မှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်တရားသူကြီးတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
အလုပ်ရှင်သည်မကောင်းသောလုပ်ရပ်ဖြင့်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်အချိန်ကမှမယူဆပါ ဒီလုပ်သားအင်အားကိုပြဌာန်းဖို့၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါဟာမင်းမှာရှိတဲ့လူသားအရင်းအမြစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ET ၏ပုဒ်မ ၅၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်အလုပ်သမားတစ် ဦး အားဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျအလုပ်ထုတ်ပစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများမှာ -
အလုပ်သမား၏အရည်အချင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်သိရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားခြင်းရှိ / မရှိ။
အလုပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမရှိခြင်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကုမ္ပဏီကအလုပ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေနေတဲ့ကာလပေးရမယ်, သင်၏အလုပ်တာ ၀ န်များကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်မှုအားလုံးကိုသင့်အားပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသေးပါကအလုပ်ရှင်သည်အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုရပ်တန့်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည်။
ET ပုဒ်မ ၅၁.၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ကျနော်တို့စီးပွားရေး, စည်းရုံးရေး, ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများအကြောင်းပြောဆို။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဆောင်းပါးတွင်ရှင်းပြထားသော်လည်းထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြင်း၊ စီးပွားရေးပြproblemsနာများရှိခြင်း၊ လုပ်အားနည်းပါးခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏အပြောင်းအလဲများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်မလုံလောက်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်နိုင်ငံတော်မှငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၀ န်ထမ်းများကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပြီး ၄ င်းတို့တွင်အကန့်အသတ်မရှိစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှသာလျှင်ဓမ္မဓိdismiss္ဌာန်ကျသောအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်း၏ကိန်းဂဏန်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အလုပ်ရှင် (သို့) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်နှင့်ပတ်သတ်သောအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းကိုအလုပ်ခန့်ထားခြင်းအတွက်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည် ရေးသားထားသောထုတ်ပယ်စာနှင့်စတင်ပါ.
ထုတ်ပယ်ခြင်းအပြင် ၀ န်ထမ်းသည်အလုပ်တွင်အသုံးပြုသောအချိန်နှင့်လျော်ညီသောလျော်ကြေးကိုရရှိလိမ့်မည်.
အကယ်၍ အလုပ်သမားသည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောမတူပါကရပ်နားခြင်းအကြောင်းကြားစာကို“ လိုက်နာမှုမရှိသော” ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးပြီးနေ့စွဲကိုမှတ်သားနိုင်သည်။ ထိုအခိုက်အတန့်၌သင့်အားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမဲ၏ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်တောင်းဆိုရန်သင့်အားအလုပ်ရက်ပေါင်း ၂၀ ရှိသည်။
အလုပ်ရှင်ရုံးခွဲဖြစ်သော SEPE သို့လည်းအလုပ်မှထွက်ခွင့်လျှောက်ထားရန်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ယခုအလုပ်သမားသည်အားလပ်ရက်များ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသည့်နေ့များစသဖြင့်မခံစားရပါက။ အလုပ်လက်မဲ့ကာလအတွက်လျှောက်ထားရန်ထိုနေ့ရက်များကို (နှင့်အလုပ်ရှင်က၎င်းတို့အားကိုးကားရန်) အတွက်စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သို့သော် ၁၅ ရက်၊ အကြောင်းကြားစာရှိရမည်။ အလုပ်သမားသည်အလုပ်သစ်တစ်ခုရှာဖွေရန်၎င်းတို့အားအလုပ်များရန်တစ်ပတ်လျှင် ၆ နာရီနားရက်ခွင့်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအကြောင်းပြချက်ကိုအကြောင်းကြားပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်သမားသည်နောက်ထပ် ၁၅ ရက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းအလုပ်သစ်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ထိုနာရီများကိုအသုံးပြုသောကြောင့်တစ်ပတ်လျှင် ၆ နာရီအလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းအားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းသည်သင့်လျော်ပါကဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းရှိလျှင်အလုပ်သမားသည်အခွင့်အရေးရှိသည်။ တစ်နှစ်လျှင်လုပ်အားခရက် ၂၀ ရရှိရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, အများဆုံး 12 လစဉ်ငွေပေးချေမှုရှိသေး၏။
အကယ်၍ အလုပ်သမားကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းထားသောအလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုဟုမှတ်ယူလျှင်အလုပ်ရှင်အားအခြားနည်းလမ်း ၂ ခုပေးထားသည်။ o အလုပ်သမားအားပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရချိန်မှသူရရှိခြင်းမရှိသောလုပ်ခများကိုပေးဆောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ဤကိစ္စတွင်တစ်နှစ်လျှင်ရက် ၂၀ လုပ်အားပေးမည်မဟုတ်သော်လည်းတစ်နှစ်လျှင် ၄၅/၃၃ ရက်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အလွန်ပုံမှန်ဖြစ်သောဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပယ်ခြင်းအကြောင်းကြားစာတွင်ပယ်ချခံရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကိုမဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် အလုပ်သမားသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောမတူနိုင်ဘဲအခြေအနေကိုအစီရင်ခံရန်အတွက်တတိယပါတီကအခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည် ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုထိရောက်စေရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုပေးအပ်မထားကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
ထုတ်ပယ်ခြင်းအမျိုးအစားများအတွင်းဓမ္မဓိobjective္ဌာန်ကျကျထုတ်ပယ်ခြင်းသည်လူသိနည်းမှုအနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်အခြေအနေကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသိသောအခါအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးရပ်တန့်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ မင်းသူ့ကိုသိလား သင်၏အလုပ်ခွင်၌အတွေ့အကြုံရှိဖူးပါသလား။ မင်းရဲ့ကိစ္စအကြောင်းပြောပြပါ ဦး ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အလုပ် » ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထုတ်ပယ်ကဘာလဲ